GOCOOLTHOKAR: बिद्यार्थी जीवन
अहिले म बिद्यार्थी बेलाको समय सम्झन्छु । हाम्रो बिद्यालयको खेल्ने ठाँउ ओरालो न ओरालो थियो । अहिले पनि छ कही कही डोजरले खनेर पहिलेको झै ओरालो भने छैन । हामी कटाहरु ओरालैमा फुटवल खेल्दिन्थिउँ । केटीहरु कोही तुतु खेल्थे त कोही गट्टा । कहिले कही हामी टोपी लुकाई पनि खेल्थ्यौ । यो चाही केटा केटी दुवैले खेलेको याद छ ।
अनि अलि ठूलो कक्षामा गए पछि भने हामीले भलिवल खेल्ने भयौ । हाम्रो स्कुलको अघोषित नियम नै भने पनि हुने ठूलाले मात्र भलिवल छुन पाउने । हामी पनि नौ कक्षामा पुग्यो अनि अलिअलि वल खेल्न पाइने भयो ।
हुन त हाम्रो बेलामा सिनियर र जुनियर टोलीले खेल्ने दुइवटा भलिवल कोर्ट थिए । सिनियरले खेल्ने बल नयाँ हुन्थ्यो । नेट नयाँ हुन्थ्यो । अनि जुनियरले खेल्ने नेट त हुन्थ्यो बल नेट कटाएर गएको हो कि बिचै बाट छिर्यो थाहा हुदैनथ्यो । कहिले कही त्यही बिषयलाई लिएर भनाभन पनि हुन्थ्यो । अनि वलको हालत पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । बल भलिबल भन्दा बढि फुटवलको झझल्को दिने खालको हुन्थ्यो । पुरानो बिग्रको बलमा नयाँ ट्यू हालेर बनाएको । यति सारो कि सर्भिस गर्नलाई पहलमान नै चाहिने । जो बलियो छ उस्लाई आफ्नो टिममा पार्नको लागि समेत निक्कै दाउपेच हुन्थ्यो । हान्नै सक्नेले पनि एक दुई चोटी सर्भिस गरे पछि अर्को पटक बल छुने आँट गर्दैनथे ।
केटाहरु भन्थे यो बलको सर्ट ¬ खेलकुदको भाषामा स्पाइक भन्छन् क्यार )जस्ले थाप्न सक्छ उ नेसनल गेमको सर्ट थाप्न सक्छ । अबस्था कस्तो थियो भने सर्भिस जताबाट कटायो उतैकाले गेम जित्थे । बल अर्को तिर बाट उडेर आए पछि डिगिङ भन्थे क्यारे थापि हाले पनि बल कता पुग्छ त्यो त थाहा हुदैनथ्यो तर टिङ गरेर तामाको स्वर वज्थ्यो । हातमा ढुङ्गा लागे जस्तो ।
मलाई पनि त्यो बल खेले पछि कन्फिडेन्ड बडथ्यो नेसनल गेम खेल्ने । तर हामी भन्दा सिनियर केटाले उता पटि खेल्ने बल मिसाका थियो । जुन हलुका यियो । अनि सर्ट थाप्न सक्ने तामा नबज्ने । खेल्न छिटो सरितो । हो त्यही कोर्टमा खेल्न पनि नसकिने बेलामा कताको नेसनल गेम खेल्नु ? मुले सिनियरहरुले हामीलाई पनि बल खेल्न दिए पो ।
सारो बल भएकोले अल्छि लागेको बेलामा त्यतिकै बसिन्थ्यो । ओरालो भयो कि मिसाका वालाहरुले सर्ट हाने पछि बल तिनले भेटाउँदैनथे । अरु बेला छुन नदिएको झोक त्यही बेला फेरिन्थ्यो । सिनियरले हातले हान्ने मिसाकालाई पाए सम्म लातले ठोक्ने । खाइस मिसाका । लु जा डाँडा कटेर ।
जसोतसो नौ पास भएपछि एसएलसीको बेलाको १० कक्षा । शिक्षकहरु भन्थे यो बेला भनेको पढ्ने बेला हो । मलाई भने लाग्थ्यो यो बेला भनेको मिसाका भलिवल खेल्ने बेला हो । अनि बिचवाट भलिवल नर्छिने नेटमा खेल्ने बेला हो । अनि केही रुपैया बाजी लगाएर चिउरा दालमोठ जितौरीको रुपमा खाने बेला हो ।
यो सबै खेल्न पाइने बेला भनेको दिउँसोको हाफ छुट्टि थियो । यो हाफ छुट्टि चारौ पिरियड पछि हुन्थ्यो । त्यसैले पनि हामी भलिवल मिसाकालाई माया गर्नेहरु सर नआइदिए हुन्थ्यो भन्ठान्थियो । अलि बढि पढाए भने टेन्सनले पारो तात्थ्यो ।
भलिबलमा आफ्नो पक्षले जित्यो भने त ठीकै छ । हार्न लाग्यो भने डाडाँ कट्ने गरि हानिदिन्थे । यो काम कहिले कही खेल्दै जस्तै गरेर हुन्थ्यो भने कहिले कही थाहा दिएरै । कहिले कही यस्तै बिषयमा बादबिबाद हुथ्यो । कुटाकुटै भने भएन ।
बरु कुटाकुट भन्दा पनि एक पटक जितबहादुरले मलाई कस्सिएको एक मुक्का हानेको भने म राम्ररी सम्झन्छु । जाडोको बेलामा थियो । हामी ओरालो पाखामा घाम ताप्दै पढ्थ्यौ । हामी कक्षा सात थियौ । चारौ पिरियड सकिए पछि हामी कवड्डी खेल्ने भयौ ।
कवड्डीको भनेर खेल्ने यो खेलको नाम अन्त अरु नै हुदो हो सायद । हामी त्यस्तै भन्थेउँ । एउटा खुट्टा एउटा हातले समातेर खेल्नु पर्ने यो खेल अन्त खेलिन्छ या खेलिदैन थाहा छैन । खेलमा केही नियम थिए । झुक्याउन नपाउने खुट्टा समाएको हात खुस्केमा या लडेमा हारको मानिने ।
यो खेल एक एक जना मात्र खेलिने भए पनि रमाइलो हेर्नेको संख्या धेरै हुन्थे । म कक्षामा बलियै बिद्यार्थीमा थिएँ । यो खेल पनि बलियैले जित्ने खेल थियो । खै कसरी हो त्यो दिन मैले जीतलाई जित्न सकिन । अनि हाम्रो झगडा सुरु भो ।
मैले झुक्याएर लडाएका ठाने । उनले ठानेनन् । मुक्काको बिउ त्यही थियो ।
तं हान्न, सक्ने बाउको छोरो भए ।
तं चाही हान्न, आमाको दुध खाएको भए ।
होइन छोएर त हेर, तेरो के हालत हुन्छ ।
तं हेर न, तेरो हालत झन के हुन्छ ।
दुबैले कुम फर्काउँदै मर्काउँदै त्यही कुरा भनिरहेको थियौ । पहिले हात हाल्नेलाई शिक्षकले बढि दोषि ठह¥याउने भएकोले बढि नै सजाएँ भोग्न पर्ने । त्यसैले हामी पहिले हात हाल्न डराउँथ्यौ । डाइलग माथि डाइलग भैरहेको बेलामा उसलाई मज्जैले रिस उठेछ । एक मुक्का हाने । नाकैको छेउमा । यस्तरी दुख्यो कि एक पटक होस गुम्यो । शायद त्यस्तै हुँदा होला तोरीको फूल भन्ने । भन्नेहरु बाहुका बे पनि भन्दा होलान् ।
मैले अघि सम्म सम्झेको बिस्तारै हान्लान । आफू पनि मुक्याउला भन्ने सुर थियो । मुक्काले रिस र आँशु दुबै एकै पटक आयो । मैले उनलाई समाउन खोज्दा नखोज्दै सँगै बसेका केटाहरुले छुट्याए ।
अनि मलाई लाग्यो दोषी नै हुने भए पनि हान्न चाही आफैले पहिले हान्नु पर्ने रहेछ । त्यही झगडाले हाम्रो केही महिना बोलचाल भएन । त्यस भन्दा बाहेक हातहाल गरेर झगडा भएन ।
काफल र ऐसेलु पाक्ने बेलामा हामी बिद्यार्थीको रोनक मज्जाको हुन्थ्यो । स्कुल देखि सबै भन्दा नजिक कि त काफ्ले बाहुनको बारीको काफल कि त्यो भन्दा अलि टाढा तामाङको । बिद्यार्थीले खान्छ भनेर काफलको रुखमा काँडा राख्थे । हामी पाकेको काफल भए जाबो काडोलाई डाँडो कटाएर काफ्ले बाहुनका काफल सखाफ पारथ्यौ ।
कहिले कही ती धनिले देखे भने कराउँदै आउँथे । त्यस्तो बेला रुखैबाट हाम फालेर भाग्नुको बिकल्प हुदैनथ्यो । त्यसैले मन पाकेको काफलमा भन्दा पनि कराउँदै आएमा भाग्नको लागि तयार बस्नु पर्ने अबस्था तिर हुन्थ्यो ।
काफल नपाक्दै देखि खाने बानी थियो । नपाकेको काफल अमिलो हुन्छ । अलि धेरै खाए पछि दात कुरीने हुन्छ । दातले केही नचपाउने ।
ऐसेलु खान भने छुट थियो । जता पाकेको छ । त्यतै जाने खाने । हामी यस्तो फलफूल खानलाई निक्कै पर सम्म पुग्थ्यौ । कहिले कही त जंगल घुम्दा घुम्दै सरहरुले हाफ छुट्टी पछिका पिरियड सिध्याउथ्यौ । काफल र ऐसेलुले हाम्रो खाजा खाने मनलाई पुरा गरथ्यौ ।
अहिले कति फेरिए होलान् बिद्यार्थीको स्वाभाव अनि काफ्ले बाहुनले काफलको बिरुवामा काँडा राख्न छाडे होलान् कि छाडेनन् होलान् ?
बिद्यार्थी जीवनमा पढाउने सर मिसका काट्ने नाम राख्ने चलन थियो र छ । हामी पनि त्यस्तो राख्नबाट पछि थिएनौ । मिस त हाम्रो बेलामा एक जना थिए । अरु सबै सर ।
तिनका नाम जे भए पनि बिद्यार्थीले राख्ने नाम अनेक थिए । ती किन थिए कसैको कारण थियो धेरैको थिएन । तै पनि अनौठा र अचम्मका नाम माथि नाम थिए ।
शैलुङस्वरकै बद्रि खत्री थिए । उनी होचा कद र सानो ज्यान भएका । धेरै बर्ष पछि गएको बर्ष भेट्दा पनि उनको ज्यान त्यस्तै थियो । उनले हिसाव पढाउथे । शान्ता राईको ठाउँमा उनी आएका थिए । हिसाव पढाउने उनको तरिका रमाइलै थियो । बाहिरी दुनियाको कुरा भन्दा कितावको पछिल्लो पन्नामा भएको एन्सर मिलाउनमा उनी तल्लिन हुन्थे । उनी कितावी किरै थिए कि ? ती सरलाई हामी उनलाई फुच्चे खत्री भन्थेउँ ।
अर्का सर थिए पवटी गाउँका शिव भुजेल । उनी आफैले भने भुजेलको पछाडी क्षेत्री लेख्थे । शायद समाजमा बाँच्न सजिलोको लागि होला । पहिले पहिले भुजेललाई घर्ती भन्थे क्यारे । अनि तीनका काम डोली बोक्ने थियो रे । उनले शायद त्यही भएर भुजेल पछि क्षेत्री लेख्थे ।
अहिले भूजेलहरु जनजातिमा छन् । आफ्नै भाषा र संस्कार भएको अनि हिन्दु धर्म नमान्ने । तर शिव सर शायद आफूलाई हिन्दु अनि क्षेत्री बनाउन चाहान्थे । ती शिब सरले हामीलाई संस्कृत पढाउथे । उनले पढाउने बेलामा अलि ढिलो बोले पनि अरु बेला उनले बोलेको कति छिटो थियो भने उनी आफैलाई उनको बोली रेकर्डं गरेर सुनाउने भए शायद उनी नै बुझ्दैनथे । त्यसैले बिद्यार्थीले ती सरलाई भक्भके घर्ती भन्थे । हामी पनि उनलाई रिसाएर भन्न प¥यो भने त्यसै भन्थेउँ ।
पवटी गाउँकै अर्का सर थिए उप्रती । ती सरको विशेषता भनेको टोपी थियो । चिटिक्क परेको टोपी आठमा खैनी र सरलक्क परेको पाइन्टमा सजिएर हिन्थे । पवटी भेग भरि उप्रेतीहरु खानदानीमा पर्थे । ती सर नपर्ने कुरै भएन । पछि ती खानदानी उप्रेतीहरु सामान्ती भए राजनैतिक परिवर्तनसँगै ।
उप्रेती सर हामीलाई अंग्रजी पढाउने भनेर आएका थिए क्यारे । तर झापाली गोपाल राईले अंग्रजीको बागडोर समाले पछि उनको भागमा शिक्षा प¥यो ।
उनी बिद्यालयमा नियमित आउँदैनथे । पढाउने कला भने गज्जवको थियो । ती आठमा थुक आउने गरि मुख बङग्यार भन्थे लिसन कियर फुल्ली । अनि सुरु हुन्थ्यो उनको पाउलो फेरेको शिक्षा पद्दती । पाउलो फेरेको कुरामा उनी प्रसंग मिलाएर कथा भन्थे लोक कथा । हामी बिद्यार्थीलाई भाँड्मा परोस पाउलो फेरे तर लोक कथा रमाइलो लाग्थ्यो । उनले कहिले कही पाउलो फेरे सोधे भने लोक कथा भन्दिथेउँ पाउलो फेरे को हो को हो ?
हामी प्रसंगै नआइ पनि ती सरलाई लोक कथा भन्न कर गर्थेउँ । ती सर धेरै समय त भन्थे कोही कोही बेला भन्दैनथे । शायद वाक्क पनि लाग्दो हो ।
पढाउनु पर्ने पाठ्यक्रमको बिकास, बिद्यार्थी राजकुमारले राजकुमारीलाई राक्षसबाट बचाएको कुरा सुन्ने मन गर्थे । त्यसैले ती सरका कहिले कही कन्सेरी तात्थे क्यारे ती फेरी त्यसै गरि उसै गरि मुख बङ्ग्याएर भन्थे लिसन कियर फुल्ली अनि सुरु हुन्थ्यो पाठ । हो ती सरका ओठ कालो थियो । त्यसैले बिद्यार्थीले गाली गर्नु परे नाम राखेका थिए कालो ओठे ।
फस्कूकै सर थिए धेरै बिद्यालयमा । हेडसर थिए चरिकोट बजार नजिक माटीका नारायण श्रेष्ठ । ती साँच्चैका हेडसर हुन कि झै लाग्थे । ज्यान थियो । भुडी थियो । स्कुल थर्काउने स्वर थियो । उनी किताबमा भएका भरर पढ्थे । अनी उनले भ्याए सम्मको ब्याख्या गर्थे । कबिता भए कन्ठ गर्नु अनिबार्य थियो । मलाई यही काम भारी लाग्थ्यो । ती कबिता कन्ठ भन्न पर्ने दिनमा लौरो ल्याउथे । कुट्न चाही उनले कुटेको याद छैन । तीनलाई लाग्थ्यो मलाई कन्ठ हुन्छ त्यसैले मलाई ती साध्दैनथे । तै पनि सोधि हाले भन्ने डर थियो । ती थिए नै हेडसर ।
कबिता धेरैका थिए । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भूमि सेरचन, धरणीधर कोइराला, उही ओखलढुङ्गे शिद्धिचरण, माधव घिमिरे, बिर्खेटोपी धारी आदिकबि, वालकृष्ण सम र अरु धेरैका । कन्ठ गर्ने कबिताको सूचिमा लामो थियो । मलाई अरु धेरै कुरा आउने भए पनि कन्ठ हुदैनथ्यो । त्यसैले तीनका कन्ठ कक्षामा निक्कै डर लाग्थ्यो ।
ती हाम्रा हेडसरलाई हामी पाडो भन्थेउँ । खै किन हो त्यो मलाई थाहा छैन । शायद नेवार भएकोले होला । हामी बिद्यार्थी ती सर आए भने गुरुरु कक्षामा दौडिन्थेउँ पाडोको डरले । ती सर कतै देखि हाले पनि कान कानमा भन्थेउँ पाडो आयो पाडो आयो ।
ती सरसँग झन्डै ९ बर्ष पछि कीर्तिपुरमै भेट भयो । ती सेन्टर लाइबेरी तिर दौडिदैथे । मैले नमस्कार गरेँ उनले मलाई ठम्याए । गोकुल । तिमी अरु कुरा त चन्ज भएछौ स्वर उस्तै रैछ । स्वरबाट चिने । म त्यो बेला मास्टर दोस्रो बर्षमा पढ्दैथिएँ । उनले मास्टर पहिलो बर्षमा भर्ना गरको कुरा सुनाए ।
मलाई लाग्यो यी पाडो सरका दिमाग भने हो । यति लामो समय पछि पनि जाबो म फुच्चेलाई चिने ।
अर्का सर थिए बासुदेव बुढाथोकी । ती बिद्यालय देखि नजिकैको सर थिए । ती चुच्चे पाइन्ट माथि सर्ट लाउथे । म बिद्यालय पढ्ता ताका खुव चलेको जुता गोल्डस्टार थियो । उनी त्यो जुता टल्काएर आउथे । उनको कपाल ठाडो हुन्थ्यो । उनको लवाईले गर्दा हो कि के हो उनको टाउको बिसाल देखिन्थ्यो ।
निक्कै सफा भएर हिड्ने सरमा पर्थे उनी । पढाउने सरको शैली हामी फस्कुले बिद्यार्थीलाई पच्ने खालको शायद थिएन । उनी अलि भेग तरिकाले पढाउथे ।
बिषय अर्थशास्त्र थियो । उनी देश बिदेशको अर्थ शास्त्रका किताव पढेर हामीलाई सुनाउथे । हामी फस्कु र शैलुङस्वर नकटेकालाई न आडम स्मिथ थाहा थियो न रस्काइल नै । हामीलाई तीनका सिद्धान्तका कुरा धेरै पच्दैनथ्योे । हामीलाई बरु एकादेशका राजकुमार र राजकुमारीको प्रेम कथा अनि राक्षसले दिएको दुःखमा बढि चाख थियो । ती बुढाथोकी सर त्यस्ता कुरा कहिल्यै भन्दैनथे ।
ती सर स्कुल भरिकै राम्रो पढ्ने सरमा थिए । हामी दस कक्षामा पढदा ताका उनको दिमागले राम्ररी काम गरेन भन्ने हल्ला चल्यो पछि ठीक भए । जे होस ती सर दुनिया पढ्न सक्नेमा थिए । ती सरलाई बिद्यार्थीले घन्टाउके सर भन्थे ।
नाम नराखेको सर शायद बाँकी थिएन । कसैलाई फोक्से सर, कसैलाई भेराइटी । कोहीलाई कामी त कसैलाई मिल्के । ती धेरै सर अहिले पनि उसै गरि म जस्ता बिद्यार्थीलाई डुङ्गा तार्न चक डस्टर खियाउँदै छन् । शायद बिद्यार्थी फेरिए शायद तिनलाई दिएको उपनाम फेरिएको हुनसक्छ । अनि धेरै सरहरुका बिद्यालय पनि फेरिए होलान् ।
पछि म देशका अरु भागको गाउँ गाउँ डुल्दा शिक्षकहरु भेटाएँ भने फुर्सदमा गफिन्छु । देश भरिका शिक्षकका कुरा उस्तै हुन् । पहिले रहर पछि बाध्यता । यसमा अपबाद पनि होला । धेरैले भन्छन् यो पेशा भन्नका लागि सम्मानित पेशा हो तर हुनको लागि कहिल्यै जस पाउने पेशा । जस्तो कि म यो मेरो बिद्यार्थी जीवनको सम्झनामा मेरो पढाइको मेलो सार्ने गुरुहरुलाई बिद्यार्थी जीवनमा कसरी गाली गर्ने नाम राख्थेउँ भनेर लेखि रहेको छु ।
हिसाव र शैलुङे